eNasha.com - चन्दा आतङ्क
हिजो तपाइँ घरबाहिर निस्कनु भयो भने ससाना बालबालिकाहरुले तपाइँलाई धेरै ठाउँमा रोके-छेके होलान् । पर्व छ शिवरात्रीको तर मानौँ सबैभन्दा बढी चिन्ता ती बालबालिकाहरुलाई नै लागेको छ झैँ तिनले तपाइँसँग केही रकम असुले होलान् । दिनु भएन भने अनेकन् गालीसमेत खानु पर्‍यो होला !
एउटा समूह भए त ठीकै छ, तर घरबाट बाहिर निस्कन पाएको छैन- पूरै लस्कर यो धन्दामा लागेको देख्दा चाहिँ जिव्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
केही वर्षता विभिन्न चाड पर्वमा ठूलो बाँसले सडक ड्याम्म रोकेर सवारीसाधन वा पैदलै हिँडेकाहरुबाट चन्दा असुल्ने क्रम तीव्र भएको छ । चाहे त्यो सरस्वती पूजा होस्, छठ पर्व होस् या शिवरात्री ! बिना कारण चन्दा असुल्ने र चन्दा दिन नमाने गन्तव्यमा नै नपुगिने अप्ठेरो स्थितिको सिर्जना हुन थालेको छ ।
उहिले ऋषिमुनिहरुले पर्व मान्नका लागि घरघरबाट भिक्षा उठाएर यज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि माग्नु त सही थियो । तर यी बालबालिकाहरुले कस्तो किसिमको यज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि चन्दा आतङ्क मच्चाएका हुन् भन्ने चाहिँ बुझ्न गाह्रो छ !
अनुभव streets संविधानसभा हल्ला माओवादी पेट्रोल awards समलिङगी सेलेब्रिटी मोबाईल celebrity crisis festival hi-life events